Faransiiska oo u diyaargaroobaya roobab aashito ah oo ka qarxa jasiiradaha Canary
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » Faransiiska oo u diyaargaroobaya roobab aashito ah oo ka qarxa jasiiradaha Canary
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Caafimaadka Warka • News • Dadka • jiga • Ammaanka • Wararka Spain • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dillaaca foolkaanada oo ku yaal Beerta Qaranka ee Cumbre Vieja Axaddii ayaa ku qasbay 6,000 oo deggan jasiiradda La Palma inay ka baxaan guryahooda. Sida laga soo xigtay war ka soo baxay Adeegga Maareynta Degdegga ah ee Copernicus Khamiistii, 350 dhisme ayaa la burburiyay, iyadoo qulqulka lafaha uu ka badan yahay 166 hektar.
Qulqullada sulfur dioxide ayaa lagu wadaa inay ku qulqulaan guud ahaan Faransiiska iyo saxanka Mediterranean -ka toddobaadkan.
Xoogga ugu badan ee daruuraha sulfur dioxide wuxuu gaari doonaa joogga 1,000 ilaa 3,000 mitir.
Machadka Volcanology ee Canary Islands ayaa ku qiyaastay qarxinta foolkaanada Cumbre Vieja oo dhalisay in baaruudda dioxide ay socon karto “inta u dhaxaysa 24 ilaa 84 maalmood”.
Keraunos, duufaannada Faransiiska iyo indha -indheynta duufaannada daran, ayaa maanta la wadaagay sawir ka yimid barnaamijka Copernicus ee Midowga Yurub oo muujinaya in dhuumaha baaruud -dioxide, oo ka dhashay qaraxyadii foolkaane ee Jasiiradaha Canary ee Isbaanish -ka, ay qarka u saaran yihiin inay qarxiyaan toddobaadkan dhammaadkiisa Faransiiska. Xoogga ugu badan ee daruuraha ayaa gaari doona joogga 1,000 ilaa 3,000 mitir.
France iyo aagagga badda Mediterranean -ka ayaa la saadaalinayaa inay dareemaan saamaynta qarxinta, maadaama daruuro ay ka buuxaan baaruudda dioxide ay ku soo qulqulayaan Yurub, taasoo roobka ka dhigaysa mid aad u acidic ah.
The Canary Islands Machadka Volcanology (Involcan) ayaa ku qiyaastay qarxinta foolkaanada Cumbre Vieja oo dhalisay in baaruudda dioxide ay socon karto “inta u dhaxaysa 24 ilaa 84 maalmood”.
Sida laga soo xigtay khubarada, baaruuddu waxay la falgashaa uumiga biyaha ee cirka ku jira taasina waxay siinaysaa sulfuric acid, waxa guud ahaan abuura roobka aashitada. Sidaas darteed, roobab maalmaha soo socda ayaa noqon doona aashito ka badan sidii caadiga ahayd meelaha ay dhibaatadu saameysey.
Sulfur dioxide waxay si isku mid ah u saamayn kartaa bay'ada iyo caafimaadka bini'aadamka, waxayna u horseedi kartaa cuncun sanbabada iyo indhaha. Qofka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu soo sheegay in ifafaalaha uusan sidaa u xoog badnaan doonin maxaa yeelay walxaha ayaa si fiican u kala firdhay.
The qarxinta volcano oo ku yaal Beerta Qaranka ee Cumbre Vieja Axaddii ayaa ku qasbay 6,000 oo deggan jasiiradda La Palma inay ka baxaan guryahooda. Sida laga soo xigtay war ka soo baxay Adeegga Maareynta Degdegga ah ee Copernicus Khamiistii, 350 dhisme ayaa la burburiyay, iyadoo qulqulka lafaha uu ka badan yahay 166 hektar.
Dillaac cusub oo foolkaanno ah ayaa soo baxay habeenimadii Isniinta Jasiiradda Canary ee Isbaanishka ka dib markii dhulgariir 4.1 la diiwaangeliyey, oo soo saaray lafo badan oo sababay in 500 oo jasiirado ah ay ka guuraan. Shaqaalaha dab -damiska ayaa ku hawlan sidii ay u gudbin lahaayeen qulqulka folkaanaha ee badda ka fog iyadoo xiriirka ka dhexeeya lafaha iyo biyaha baddu uu abuuri karo qiiqa sunta ah.